78 no maty ary mananika ny fiakarana any Sulawesi Andrefana, Indonezia
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » 78 no maty ary mananika ny fiakarana any Sulawesi Andrefana, Indonezia
Janoary 18, 2021
Olona 78 no maty noho ny horohoron-tany mahery tany Sulawesi Andrefana Indonezia. Mety hiakatra ity isa ity.
Betsaka ny tsy manan-kialofana. Miezaka ny handray an-tanana ny toe-draharaha ny manampahefana.
Ny isan'ny maty noho ny horohoron-tany mahery tany Sulawesi Andrefana dia nahatratra hatrany amin'ny 78, hoy ny manampahefana ny alatsinainy teo, izay an'arivony no tsy manan-kialofana rehefa nitanjozotra ireo mpamonjy voina hahita olona mbola velona eo ambanin'ny tendrombohitra rava.
Ny hopitaly dia tototry ny naratra an-jatony taorian'ny horohoron-tany nahatratra 6.2 tamin'ny ora vao marainan'ny zoma, ary niteraka horohoro ireo mponina tao amin'ilay nosy, izay tratry ny horohoron-tany-tsunami tamin'ny taona 2018 nahafaty olona an'arivony. Nandany andro maromaro ny mpamonjy voina nitaona ny faty avy tao ambanin'ny trano rava ao Mamuju, tanàna misy olona 110,000 ao amin'ny faritanin'i Sulawesi Andrefana, izay nahalasa hopitaly ary rava ny toeram-pivarotana lehibe. Ny sasany kosa novonoina tany atsimon'ny tanàna.
Mbola mety hiakatra ny isan'ireo maty ofisialy. Ny sary an'habakabaka avy tao amin'ny tanàna amoron-dranomasina rava dia nampiseho ireo trano nihena ho metaly marokoroko sy vongana beton, toy ny biraon'ny governoran'ny faritra.
Tsy fantatra mazava hoe firy ny vatana mety ho ambanin'ireo potipoti-javatra, na raha mbola misy olona voafandrika nefa velona mihoatra ny roa andro taorian'ny loza. Tsy nanome tarehimarika momba ny isan'ny sisa voavonjy ireo tompon'andraikitra.
Ny vatana mangatsiaka dia azo averina avy tao ambanin'ny hopitaly nianjera, raha mpikambana dimy amin'ny fianakaviana valo kosa no hita faty tao amin'ny sisa tavela tao an-tranony.
Ny an'arivony tsy nanan-kialofana tamin'ilay horohoron-tany dia nitazona fialofana vonjimaika - betsaka lavitra noho ny tranolay rakotra tarpaulin feno fianakaviana iray manontolo - izay tratry ny oram-be nivatravatra.
Nilaza izy ireo fa tsy manana sakafo, lamba firakotra ary fanampiana hafa, satria nentina haingana tany amin'ny faritra voa mafy ny vonjy taitra. Betsaka ny sisa velona tsy afaka miverina any amin'ny tranony rava na natahotra loatra ka tsy afaka niverina natahotra ny tsunami vokatry ny horohoron-tany, izay mahazatra aorian'ny horohoron-tany mafy.
Tany Kalimantan mpifanila vodirindrina, faritra ao amin'ny nosy Borneo, Indonezia, farafahakeliny olona dimy no maty tamin'ny tondra-drano be, raha am-polony maro kosa no tsy hita, raha ny tatitra voaray, raha tondra-drano no namono olona dimy farafahakeliny tao Manado, an-jatony kilometatra avaratry ny horohorontany tany Sulawesi .
Ny fihotsahan'ny tany tany West Java Andrefana dia nahafaty olona 28 farafahakeliny tamin'ity herinandro ity rehefa nijaly ny vanim-potoanan'ny orana tamin'ny ampahany tamin'ny firenena marobe. Tany amin'ny faran'ny atsinanan'ny nosy Java dia nipoaka ny faran'ny sabotsy teo ny Tendrombohitra Semeru, nitifitra lavenona sy potipoti-javatra manodidina ny 4.5 kilometatra tany an-danitra, satria nisy lava mena mamirapiratra nidina avy tao amin'ny vava-vatany.